WAR DEG DEG AH DAAWO:KULMIYE, UCID, WADANNI iyo Jaaliyada UK oo ka digay BANAANBAX ay sheegeen in CADOWGA HORUMARKA Somaliland abaabulayaan. |
WAR DEG DEG AH DAAWO:KULMIYE, UCID, WADANNI iyo Jaaliyada UK oo ka digay BANAANBAX ay sheegeen in CADOWGA HORUMARKA Somaliland abaabulayaan.
“Waxaan caddeynayanaa inaanu qofna xaq u lahayn, kuna mudaharaadi Karin magaca, astaanta iyo milgaha xisbiga WADANNI….” Wakiil xisbiga Wadanni UK.
London(GNN)- Saddexda xisbi ee KULMIYE, UCID & WADANNI iyo Jaaliyadda Somaliland ee dalka UK ayaa wadajir ugu baaqay inay ka soo horjeedaan, isla markaana aanay taageersanayn, uguna baaqayaan bulshada inaanay ka qeybqaadan banaanbax la sheegay in lagu hordhigayo safaarada Imaaraadka ee London.
Kulan wadajir ay maanta u qabteen magaalada London, masuuliyiin ka tirsan saddexda xisbi iyo gudoomiyaha Jaaliyadda Somaliland ee dalka UK ayaa lagu sheegay in aanay garanayn dadka qabanqaabinaya banaanbaxan, isla markaana aanu ahayn mid saddexda xisbi iyo madaxda jaaliyadu ka warqabaan.
Gudoomiyaha Jaaliyadda Somaliland ee UK Mr. oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa yidhi,
“Dhamaan madaxda saddexda xisbi iyo jaaliyada Somaliland waxaan isugu nimi arrinka saldhiga Imaaraadku ka dhisanayo Berbera, oo la sheegay in dad Soomaali u dhashay banaanbax ka hor samaynayaan safaarada Imaaraadka ee London.
“Annigoo ka wakiil ah Jaaliyada Somaliland ee UK, Gudoomiyaheediina ah, waxaan caddeynaya dadkaa doonaya inay ku mudaharaadkaan, ee soomaalida ah, halkay doonaan haka yimaadaane, aanan ku raacsanayn ayaan caddeynayaa.
Masuul u hadlay xisbiga WADANNI oo kulanka ka hadlay ayaa yidhi, “Somaliland dhexdeeda waxa yaala, sharcigeeda, qawaaniinteeda ayuu ku wareegayaa. Hadaanu nahay xisbiga WADANNI waxaan caddeynayanaa inaanu qofna xaq u lahayn, kuna mudaharaadi Karin magaca, astaanta iyo milgaha xisbiga WADANNI. Waxaan caddeynaynaa inaan berri ka nahay ciddii falka aku kacda.
Masuul u hadlay xisbiga kulmiye oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dhamaan bulshada Somaliland ka midaysan tahay heshiiska saldhiga Imaaraadka, waxaanu yidhi,
“markaan dhan walba isla eegnay, waxaan ogaanay in bulshada Somaliland iyo saddexda xisbi ka midaysan yihiin in la xaq-dhowro shuruucda aynu leenahay ee goleyaasha Qaranku go’aamiyeen, ee saldhiga laga siiyey dalka Imaaraadka carabta magaalada Berbera.
Gudoomiye-xigeenka saddexaad ee xisbiga UCID Mr. Siciid Cabdi Axmed oo kulanka ka hadlay ayaa yidhi,
“halkan waxaanu kaga hadlayna inaan saddexda xisbi ee Kulmiye, Ucid iyo Wadanni iyo jaaliyadu ka midaysan nahay inaan ka soo horjeedno mudaharaadka dhalinyaradu wadaan. Waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiyada qaranka, gaar ahaan xisbiga UCID inaanay ka qeybqaadan.
Waxgarad kaloo ka qeybgalay kulanka saddexda xisbi iyo jaaliyadu kaga digayeen banaanbaxa oo ka hadlay ayaa yidhi,
“Xukuumada soomaaliya iyo dadka kale ka soo horjeeda qadiyadeena, ee inoogu yeedha maamul goboleedka, eel eh mudaharaad ayaan samaynaynaa iyo dhalinyarada ku taageeraysa, waanu ka soo horjeedaa.
Kulanka oo ay ka soo qeybgaleen madax ka socday saddexda xisbi qaran ee Somaliland, jaaliyada Somaliland ee UK iyo waxgarad iyo aqoonyahano reer Somaliland ah ayaa dhamaantood isla qaateen inay ka soo horjeedaan banaanbaxa ay wadaan dad ay ku tilmaameen cadowga horumarka Somaliland, waxaanay ugu baaqeen bulshada Somaliland guddo iyo dibed inay u midoobaan horumarka dalkooda.